उपभोक्ताहरूका लागि दुखद खबर: १५ दिन नपुग्दै फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ! — Imandarmedia.com
उपभोक्ताहरूका लागि दुखद खबर: १५ दिन नपुग्दै फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य !
नेपाल आयल निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा प्रतिलिटर १–१ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको हो ।
नयाँ मूल्य अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ७८–७८ रुपैयाँ पुगेको छ । खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ ।
मंसिर २२ मा इन्धनको मूल्य बढाएको निगमले १५ दिन नवित्दै दोस्रो पटक मुल्य वृद्धि गरेको हो । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको दाबी गरे ।
नयाँ मूल्यसूची अनुसार अब निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रालमा २ रुपैयाँ ६७ पैसा नाफा नाफा छ । त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ७४ पैसा घाटा छ ।
मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २७ पैसा नाफा तथा हवाई इन्धन आन्तरिकमा १२ रुपैयाँ ८३ पैसा र बाहृयमा २४ रुपैयाँ ८८ पैसा नाफा रहेकोे निगमले जनाएको छ । खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा भने अझै पनि प्रतिसिलिण्डर २ सय २६ रुपैयाँ घाटा छ ।
तर पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएसँगै उपभाेक्ताहरू भने तनावमा परेका छन् ।
२०७४ पुष ४ गते प्रकाशित